Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अर्को जनआन्दोलन हुने छनक – Emountain TV
अर्को जनआन्दोलन हुने छनक
काठमाडौं, २७ असार । जनआन्दोलन २०६२-२०६३ पछि राजतन्त्र हटाइयो, गणतन्त्रको उद्घोष गरियो । अब त जनताका इच्छा–चाहना पूरा होलान्, शान्ति–सुव्यवस्था होला, गरिबका पनि दिन आऊलान् भन्ने लागेको थियो । सबैलाई समान न्याय होला, सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको अन्त्य होला भन्ने लागेको थियो । त्यसैले अधिकांश नागरिकमा उत्साह–उमंग जागेको थियो । तर यत्तिका वर्ष बित्दा पनि जनताका आशा निराशामा बदलिए । जनता झनै असुरक्षित र पीडित हुन लागेको आभास भएको छ ।
अहिले पीडिते न्यायको भीख माग्दा पनि नपाइने भएको छ । न्यायालय पनि निरीहजस्तै भएको देखिन्छ । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलको मान्छेले जति नै ठूलो कसुर गरे पनि उसले उन्मुक्ति पाउने गरेको छ । सरकारमा हुनेहरुले जे गरे पनि नागरिक निरीह बनेर टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने भएको छ ।
सरकारमा रहनेहरु आफूहरुलाई फाइदा हुने किसिमका नीति नियम बनाउन लागिपर्छन्, उनीहरुलाई सामान्य नागरिकको के वास्ता ? विगतको आन्दोलन जनताका लागि नभएर तिनै नेताहरुका लागि गरिएको जस्तो भएको छ । त्यसैले यस्तै भइरहने हो भने अब अर्को जनआन्दोलन हुने समय धेरै नजिक आइसकेको छ । यदि अर्को जनआन्दोलन भयो भने मुलुक र यी नेताहरुको हालत के होला ?